Baked macaroni uye béchamel, yakapfava pasita dhishi | Kicheni Mapepa
Yakabikwa macaroni ine béchamel
Montse Morote | | Mapinda Anopisa
Baked macaroni uye béchamel, inonaka pasita dhishi iyo munhu wese yaachada, zviri nyore kugadzirira. Pasika yakabikwa ine béchamel ndeyechinyakare mumakicheni edu, kana imba yega yega ichizvigadzirira kuda kwavo uye nekuravira kwemhuri yedu.
Este dhishi rinogona kuitwawo sekushandisa, sezvo ichi chichigona kugadzirwa nepasta yasara yatakasiya kubva kune imwe nzira, zvakare imwe nyama yakasara yakagayiwa kana nyama dzekudya dzatakasiya ...
300 gr. nyama yakasanganiswa (yemombe-yenguruve)
Chirongo chemadomasi akagochwa
Chinhu chekutanga kuisa pasita yekubika, isu tinoisa macaroni nemvura inopisa, ine munyu mushoma.
Mune pani yekutsvaira tinoisa anyezi yakatemwa tobva taisa nyama yakagayiwa.
Kana taona kuti nyama yakasununguka uye inotora ruvara, tinoisa muto wemadomasi wakakangwa, unogona kugadzirwa mumba kana kutengwa, munyu uye mhiripiri tinozoirega ichibika pamoto uri pakati.
Mushure memaminetsi gumi unoravira munyu woisa pane zvaunofarira.
Kana dzava macaroni, unoisa kudrain zvakanaka tobva tasanganisa nenyama yacho, tobva taiisa mutray yekubikira.
Isu tinogadzirira iyo bechamel, mupani kana pani yekutsvaira tinoisa bhotoro pamusoro wepakati moto.
Kana yanyungudika, tinowedzera hupfu, fambisa zvakanaka uye rega ubike uye utore pane zvishoma vara.
Tichadurura mukaka zvishoma nezvishoma, izvo zvatichava tambopisa mu microwave uye isu hatizoregi kusimudzira netsvimbo.
Tichawedzera munyu uye nutmeg. Kana iri gobvu uye sekuda kwedu, ichave yakagadzirira.
Kana ichigadzira mapundu neupfu, pfuudza iyo blender uye ichave yakanaka.
Vhara pasita nemuto uye chizii chakakangwa, chiise muchoto ugoisiya kusvikira yatsvukira.
Isu tinoshumira kupisa zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Yakabikwa macaroni ine béchamel
Hembe dzekare dzine nzizi
Puff pastry mipumburu